Uchungechunge lwe-Apple 7: inkulu, inamandla, iyafana | Izindaba ze-IPhone
Uchungechunge lwe-Apple 7: lukhulu, luqinile, luyafana
ULuis Padilla | 18/10/2021 11:53 | Kubuyekezwe ku- 18/10/2021 11:55 | I-Apple Watch, eziningana
Sivivinye i-Apple Watch Series 7, ikakhulukazi imodeli yensimbi ngombala we-graphite enokuxhuma kwe-LTE. Isikrini esikhulu nokulayishwa okusheshayo… ingabe kufanele ushintsho? Kuya ngalokho onakho esihlakaleni.
Amahlebezi nge-Apple Watch yekusasa aqala kusukela lapho kwethulwa imodeli entsha, futhi unyaka wonke kunesikhathi semibono eminingi egcina isiphenduke ukudumazeka. Kulo nyaka besilindele ushintsho ekwakhiweni, kufaka phakathi izinzwa ezintsha ukukala amazinga okushisa namazinga kashukela egazini, ngisho nomfutho wegazi wawuzolawulwa yi-Apple Watch. Kepha iqiniso ukuthi i-Apple Watch ifinyelele ezingeni eliphezulu lokuvuthwa kangangokuthi izinguquko sezivele zize nge-dropper, futhi kulo nyaka uyakuqinisekisa.
1 Osayizi abasha, ukwakheka okufanayo
2 Ukumelana ngokwengeziwe
3 Imali esheshayo
4 Imibala emisha kepha ayikho imibala
5 Konke okunye akuguquki
6 Isikrini siyakufakazela konke lokho
Osayizi abasha, ukwakheka okufanayo
Intsha enkulu ye-Apple Watch entsha ngosayizi wayo omkhulu kuzo zombili izinhlobo. Ngokwanda okuncane ngosayizi ophelele, i-Apple ikwazile ukukhulisa usayizi wokuboniswa kuwo womabili amamodeli, kunciphisa ama-bezels aze afike lapho izibonisi zinweba khona emaphethelweni eglasi, kuyabonakala ikakhulukazi lapho sibona izithombe zesikrini esigcwele noma sisebenzisa imikhakha yabo emisha, okukhethekile ku-Series 7. Isikrini sifinyelela ku-20% sikhulu kune-Series 6, futhi yize ekuqaleni bekubonakala sengathi ushintsho beluzocishe lube yinto encane, empilweni yangempela kubukeka sengathi lukhulu kakhulu.
Sebenzisa izinhlelo zokusebenza ezifana ne-Calculator, Ukudayela kwe-Contour kanye ne-Modular Duo (okukhethekile), noma ikhibhodi ephelele ephelele (futhi ekhethekile) igqamisa lolu sayizi omkhulu wesikrini. Kukhombisa okuningi ... yize singekho isizathu sokungatholakali nakumamodeli wangaphambilini, ngoba uma i-Series 7 ye-41mm ingaba nabo, i-Series 6 ye-44mm nayo ingaba nayo. Kuyihlazo lezi zinhlobo zezinqumo, ngoba i-Apple Watch (Series 6) enonyaka ubudala isivele iphelelwa isoftware entsha, futhi lokho akwenzi nhlobo usizo lwedivayisi.
Ngaphezu kokwenza usayizi omusha, isikrini siyakhanya (kufika ku-70%) uma singenzi lutho, inqobo nje uma unenketho ye- "Always-on screen". Uma ungakaze uzame le nketho ye-Apple Watch, ngokuqinisekile ngeke uyazise, ​​kepha uma usunayo uyabona ukuthi iyasebenziseka kakhulu ngoba ikuvumela ukuthi uhlole isikhathi ngenkathi ubhala i-athikili enjengale, ngaphandle kokuthi uphakamise isandla sakho kusuka kukhibhodi bese uphonsa isihlakala sakho. lolu shintsho ekukhanyeni luthuthukisa lokhu kusebenza futhi lwenza kanjalo (ngombono) ngaphandle kokuthinta ukuzimela kwewashi, kuhle kakhulu.
Siyaqhubeka nokukhuluma ngesikrini sewashi, enye yezingxenye zayo ezibucayi kakhulu. I-Apple iqinisekisa lokho ingilazi engaphambili ye-Apple Watch imelana nokushaqeka, sibonga umklamo omusha onesisekelo esiyisicaba, ngaphezu kokuqinisekisa iwashi njenge-IP6X elwa nothuli, elilinikeza ukuvikeleka okuphelele. I-Apple ayikaze iqinisekise iwashi layo ngokumelana nothuli, ngakho-ke asiwazi umehluko uma kuqhathaniswa nezizukulwane ezedlule. Mayelana nokumelana namanzi, siyaqhubeka nokujula kwamamitha angama-50, bekungekho zinguquko kulokhu.
I-Apple Watch isenamawindi angaphambili ahlukile kuye ngokuthi iyimodeli yeSport noma imodeli yensimbi. Endabeni yemodeli yeSport, inengilazi ye-IonX emelana kakhulu nokushaqeka, engamelani kakhulu nokuklwebheka, ngenkathi imodeli yensimbi i-crystal yenziwe nge-Sapphire, imelana kakhulu nokunwaya, kepha ayimelani neze nokushaqeka. Kokuhlangenwe nakho kwami, ngikhathazeke kakhulu ngokuklwebheka kwengilazi kunamaqhuqhuva, futhi kungesinye sezizathu esenza ngiphinde ngakhetha imodeli yensimbi ngemuva konyaka ne-Aluminium Series 6.
Ukushaja ngokushesha kube ngesinye sezici okugxilwe kuzo ukuthuthuka kwale Apple Watch Series 7. Besizothanda kakhulu ukukhulisa ukuzimela size sifinyelele ezinsukwini ezimbili ngaphandle kokukugcwalisa, kepha kufanele sikuxazululele kuthatha isikhathi esincane ukushaja kabusha. Okuthile kungcono kunalutho. Lokhu kuzokwenza kube lula ukukwazi ukuwugqoka ebusuku ukuqapha ukulala kwethu futhi ekuseni kusebenza njengewashi le-alamu.. Ngokuya nge-Apple, singashaja kabusha i-Series 7 yethu efinyelela kuma-30% ngokushesha kune-Series 6, sisuka ku-zero siye ku-80% ngemizuzu engama-45, nemizuzu engu-8 yokuvuselela (ngenkathi sixubha amazinyo) sinikela ubusuku bonke bokuqapha ukulala.
Selokhu i-Apple yethule lo msebenzi omusha wokulala ku-Apple Watch yethu, sengikujwayele ukuyishaja kabili ngosuku: uma ngifika ekhaya ebusuku ngenkathi ngilungisa isidlo sakusihlwa ngize ngilale, nasekuseni ngisageza. Ngalesi sikhwama esisha esisheshayo ngizokwazi ukubeka iwashi esihlakaleni sami ekuqaleni ebusuku, ngaphandle kokulinda ukulala ... inqobo nje uma ngikhumbula, okuzokwenzeka kakhulu kakhulu. Mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi lokhu kukhokhiswa okusheshayo kuzoba lusizo ngempela, kepha okwamanje angicabangi ukuthi kuzoba ushintsho olukhulu emikhubeni yabaningi.
Ukuze ukwazi ukusebenzisa ukushaja okusheshayo, kuyadingeka ukusebenzisa ikhebuli entsha yeshaja enesixhumi se-USB-C esifakwe ebhokisini le-Apple Watch, kanye ishaja okumele ibe namandla okushaja ayi-18W noma ihambisane ne-Power Delivery lapho i-5W izokwanela. Ishaja ye-Apple ejwayelekile ilungele lokhu, noma enye ishaja evela kumkhiqizi onokwethenjelwa esingayithola ku-Amazon ngentengo ephansi (kanje). Ngale ndlela, i-Apple MagSafe base ebiza u- € 149 ayihambelani nokushaja okusheshayo, imininingwane enhle.
Imibala emisha kepha ayikho imibala
Kulo nyaka i-Apple ithathe isinqumo sokushintsha umbala we-Apple Watch yayo ngendlela enkulu, futhi ikwenze ngesinqumo esingathandwanga yiwo wonke umuntu. Endabeni ye-aluminium Apple Watch Sport, Asisenaso isiliva noma i-space grey, ngoba i-Apple ingeze inkanyezi emhlophe (okuyi-white-gold) kanye naphakathi kwamabili (blue-black) ukuyishintsha. Igcina okubomvu nokuhlaza okwesibhakabhaka, futhi ibuye ingeze isitayela samasosha aluhlaza esimnyama esithandwa kakhulu. Ukube bengikhethe i-aluminium kulo nyaka ngicabanga ukuthi bengizohlala phakathi kwamabili, kepha ayikho imibala engikholisayo ngempela.
Mhlawumbe lokho kungenze ngaya kwimodeli yensimbi, ebivele ihlasela ikhanda lami kusukela ngaphambi kokuthi ngazi imibala yokugcina. Ngensimbi itholakala ngesiliva, igolide ne-graphite (ngoba isikhala esimnyama sinqunyelwe kuhlobo lweHermes lapho iningi lingatholakali). Insimbi ihlale idala izinsolo eziningi kulabo abacabanga ngayo ngenxa yokuthi izomelana kanjani nokuhamba kwesikhathi, kepha ibamba kangcono kakhulu kune-aluminium. Futhi ngikusho lokhu ngemuva kokuba ngine-Apple Watch ezimbili ngensimbi nezimbili nge-aluminium.
Ekugcineni sinokukhetha kwe-Apple Watch nge-titanium, enesikhala esimnyama nombala we-titanium ongangikholisi, yingakho ngakhetha insimbi, nayo eshibhile.
Konke okunye akuguquki
Azisekho izinguquko ku-Apple Watch entsha. Usayizi wesikrini omkhulu ngokukhanya okwengeziwe kokungenzi lutho, ukumelana okwengeziwe kwengilazi yangaphambili nokushaja okusheshayo engingakuboni ukusetshenziswa okukhulu okwamanje. Asikaze ngisho sikhulume ngamandla amakhulu noma ijubane lapho senza imisebenzi, ngoba ayikho. Iprosesa efaka lolu Chungechunge olusha 7 icishe ifane ne-Series 6, ngakolunye uhlangothi esebenza kahle impela nangohlelo olusanda kwenziwa, i-watchOS 8, kepha iyafana. Abanye bethu babelindele isinyathelo esincane sokuzibusa ngaphandle kwe-iPhone, kepha hhayi.
Azikho futhi izinguquko kuzinzwa, noma emisebenzini yezempilo, hhayi ekuqapheni ubuthongo, hhayi kunoma yimuphi umsebenzi omusha, njengoba kungekho. Uma sibeka eceleni ukudayela okusha, asikho isici esikhethekile se-Series 7, kodwa hhayi ngoba sifakiwe kokunye, kodwa ngoba akukho okusha ngempela. I-Apple Watch ingumkhiqizo oyindilinga kakhulu, kokubili ngokwakhiwa nemisebenzi yayo yokuqapha ezempilo nezemidlalo. Isilinganiso sokushaya kwenhliziyo, ukutholwa kwesigqi esingajwayelekile, isilinganiso sokugcwaliswa komoya-mpilo kanye nokusebenza kwe-EKG kubeka ibha phezulu kakhulu, iphakeme kakhulu kangangokuba ne-Apple ayikwazanga ukuyishaya kulo nyaka, ihlale lapho yayikhona. Ungayithenga kusuka ku- € 429 (aluminium) kwa-Apple nase-Amazon (isixhumanisi)
Isikrini siyakufakazela konke lokho
I-Apple yethule i-smartwatch esisha lapho ibheje khona konke esikrinini esihlaba umxhwele, esihle futhi esikhanyayo. Kuyamangalisa ngempela ngokushesha nje lapho uyikhipha ebhokisini bese uvula iwashi okokuqala ngqa. Ushintsho ngosayizi nokwanda kwendawo yesikrini cishe emaphethelweni kukwenza kubukeke njengewashi elikhulu kakhulu kunangaphambili, ngaphandle kokukhulisa usayizi. Kepha kuphelele lapho, akukho okusha okungashiwo ngalolu Chungechunge 7, okungenani akukho okusha okusebenzayo ngempela.
I-Apple Watch iyi-smartwatch engcono kunazo zonke emakethe, kude neyesibili, futhi ngisho nekhefu lalo nyaka ngeke lenze leli banga lifinyele. Isinqumo sokuthenga i-Apple Watch Series 7 kumele senziwe ngokubheka ukuthi ugqokeni manje esihlakaleni. Ingabe kuzoba i-Apple Watch yakho yokuqala? Ngakho-ke uthola i-smartwatch engcono kakhulu ongayithenga njengamanje. Ingabe usunayo i-Apple Watch? Uma ngabe uthathe isinqumo sokuyiguqula, qhubeka. Kepha Uma ubungabaza, lolu chungechunge olusha 7 ngeke likunikeze izizathu eziningi kakhulu zokukususa.
I-Apple Buka i-7
Kuthunyelwe ku: 18 Okthoba ka-2021
Ukulungiswa kokugcina: 18 Okthoba ka-2021
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » eziningana » Uchungechunge lwe-Apple 7: lukhulu, luqinile, luyafana
Imizuzu eyi-8 yokuxubha amazinyo ethu…. Ngenza okuthile okungalungile X)
Izitolo eziku-inthanethi zivaliwe! Umcimbi we-Mac useduze
I-Apple iyaqhubeka nokuhoxisa izinhlelo zokusebenza ngesicelo sikahulumeni waseChina